gaba Ungathanda Ukwazi Eyona Nyaniso?
Intetho Yezandla yaseDenmark
Intetho Yezandla yaseLithuania
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UThixo akangonobangela wobungendawo. UYobhi 34:10 uthi: “Makube lee kuThixo oyinyaniso ukwenza ngobungendawo, nakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!” UThixo unenjongo ebonisa ukuba uyabathanda abantu. Yiloo nto uYesu wafundisa ukuba sithi xa sithandaza: “Bawo wethu osemazulwini, . . . mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mateyu 6:9, 10) Kangangendlela asikhathalela ngayo uThixo uye wenza okuninzi eqinisekisa ukuba injongo yakhe iza kuphumelela.—Yohane 3:16.
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UThixo ulichazile ixesha aya kumisela ngalo uxolo emhlabeni wonke. Phantsi koBukumkani bakhe obungurhulumente wasezulwini, abantu ‘abayi kuphinda bafunde imfazwe.’ Kodwa ‘baya kukhanda amakrele abo abe ngamakhuba.’ (Isaya 2:4) UThixo uya kuphelisa konke okungekho sikweni nokubandezeleka. IBhayibhile ithembisa oku: “[UThixo] uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili [eziquka okungekho sikweni nokubandezeleka okwenzeka namhlanje] zidlule.”—ISityhilelo 21:3, 4.
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Abantu xa befile abaphili. INtshumayeli 9:5 ithi: “Abafileyo, abazi nto konke konke.” Ekubeni abafileyo bengenakwazi, beve okanye bazi nantoni na, abanakubenzakalisa—okanye babancede—abaphilayo.—INdumiso 146:3, 4.
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Abantu abaninzi abafileyo baza kuvuswa. UYesu wathembisa ukuba ‘abo bakumangcwaba enkumbulo baya kuphuma.’ (Yohane 5:28, 29) Ngokuvisisana nenjongo kaThixo yasekuqaleni, abo bavusiweyo baya kuba nethuba lokuphila kwiparadesi esemhlabeni. (Luka 23:43) Eli kamva lithenjisiweyo liquka impilo egqibeleleyo nobomi obungunaphakade kwabo bathobelayo. IBhayibhile ithi: “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”—INdumiso 37:29.
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UYesu wachaza eyona ndlela yokufumana ulonwabo xa wathi: “Banoyolo abo bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya, kuba ubukumkani bamazulu bobabo.” (Mateyu 5:3) Ulonwabo lokwenene sinokulufumana kuphela ukuba sizabalazela ukwanelisa eyona ntswelo yethu ibalulekileyo—ukulambela inyaniso yokomoya ephathelele uThixo nenjongo yakhe ngathi. Loo nyaniso ifumaneka eBhayibhileni. Ukwazi loo nyaniso kunokusinceda siqonde eyona nto ibaluleke ngokwenene—naleyo ingabalulekanga. Ukuvumela inyaniso yeBhayibhile yalathise izigqibo nezenzo zethu kukhokelela kubomi obanelisayo.—Luka 11:28.
Abukho ubutyebi onokubufumana obodlula obu. Inyaniso yeBhayibhile iyasikhulula kwiinkolelo, ukudideka nakuloyiko. Isinika ithemba, injongo kwakunye novuyo. UYesu wathi: “Niya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.”—Yohane 8:32.
Ngaba Unemibuzo YeBhayibhile? Fumana Iimpendulo Ezichanileyo!